Ye`Mon Aung's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
MalePyin Oo Lwin, MandalayMyanmar Share on Facebook
Blog PostsDiscussions (11)EventsGroups Ye`Mon Aung's Likes Gifts Received
Ye`Mon Aung has not received any gifts yet
Ye`Mon Aung's Page
Ye`Mon Aung replied to Min Thura's discussion How to open .do file?"I far as I know, 'DO' file extensions are used for web apps written by Oracle Database and Java EE. They are used for the dynamic web pages, generated by Oracle Application Server, much more like '.php' for PHP pages."Jul 29, 2012Ye`Mon Aung replied to nyingeko's discussion C Program For avaiable bus seat display (ကူညီကြပါဦးဗျာ)"ကျွန်တော် အပေါ်က Wayne ပြောတာကိုပဲ နည်းနည်း ချဲ့စဉ်းစား ကြည့်ပါမယ်... ခုံ ၈ လုံးအတွက် input ၇ နှစ်ခုဆိုတာ မှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့်7Segment LED ဆိုတာ မီလုံး ၇လုံး ဆိုတဲ့အတွက် output ၇ နှစ်ခု မဟုတ်ပါ... သူက LED မီးလုံး ၇…"Jul 20, 2012Ye`Mon Aung replied to nyingeko's discussion C Program For avaiable bus seat display (ကူညီကြပါဦးဗျာ)"မှန်ပါတယ်... ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လဲ ကျောင်းသား တစ်ယောက်ပါပဲ... ကိုယ်က စစ လေ့လာချင်းဆိုရင် အမြဲတမ်း ဒီလို အခက်အခဲတွေ ရှိလာတတ်တာပဲ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်အရမ်း ကျပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ idea ၀ိုင်း စဉ်းစားပေးနိုင်ပါတယ်"Jul 20, 2012Ye`Mon Aung replied to Myint Kyaw Thu's discussion မြန်မာများ ရေးသားသော App များကို crack လုပ်နေသော Myanmar Mobile App Store"ကျွန်တော် Ko Myint Kyaw Ko ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ software industry ကြီး တစ်ခုလုံး တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကော လူအများကကော ၀ိုင်းပြီး လက်ခံထားကြတဲ့ standard တစ်ခုကို…"Jul 19, 2012Ye`Mon Aung replied to Myint Kyaw Thu's discussion မြန်မာများ ရေးသားသော App များကို crack လုပ်နေသော Myanmar Mobile App Store"ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဒီလိုမျိုးတွေကို လုံးဝအားမပေးဘူးဆိုတာလဲ သိသာအောင် နောင်လဲ mobile industry က အများကြီး ကျယ်ပြန့်လာမှာဆိုတော့ developer တွေအတွက်လဲ အများကြီးအကျိုးရှိအောင် တရားဝင် market site တွေ တည်ဆောက်ပြီးတော့…"Jul 18, 2012Ye`Mon Aung replied to Myint Kyaw Thu's discussion မြန်မာများ ရေးသားသော App များကို crack လုပ်နေသော Myanmar Mobile App Store"မှန်ပါတယ်
ကိုယ်ပိုင်လို့ဆိုပြီး upload ပြန်တင်တာတောင် အနည်းဆုံးတော့ မူရင်း developer တွေကို credit ပေးသင့်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ electronic copyright နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဥပဒေ ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးဘူးဆိုပြီး လုပ်ချင်ရာ…"Jul 18, 2012Ye`Mon Aung replied to nyingeko's discussion C Program For avaiable bus seat display (ကူညီကြပါဦးဗျာ)"စေတနာကောင်းနဲ့ အကြံပေးပါရစေ....
IT forum များဟာ ပြသနာတစ်ခုကို လူအများဝိုင်းပြီး အဖြေရှာကြဖို့ အတွက် တည်ဆောက်ထားတာလို့ ထင်မိပါတယ်
ဆိုလိုတာက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမတတ်နိုင်တဲ့ ပြသနာတစ်ခုကို လူအများက ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးဖို့လို့ ထင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့်…"Jul 17, 2012Ye`Mon Aung replied to lin lin's discussion Blog တင်ဖို့အကြောင်း"ကျွန်တော် blog တစ်ခုကိုဘယ်လိုစရေးရမယ်ဆိုတာ practical blog တစ်ခုကို tutorial သဘောမျိုးရေး ပြီး တင်ထားပေးပါတယ်
ဒီလင့်မှာ ၀င်ကြည့်ကြည့်ပါ။ TechSpot Blog
အဆင်ပြေပါစေ...!"Jul 16, 2012Ye`Mon Aung replied to lin lin's discussion Blog တင်ဖို့အကြောင်း"Blog ရေးတာ အခုချိန်မှာ အရမ်းလွယ်သွားပါပြီ
Internet မှာ Blogging အတွက် service provider တွေ အများကြီးပါ
နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ Google Blogger နဲ့ Word Press.org ပါ
တခြား site တွေလဲ အများကြီးရှိပါသေးတယ်
Google မှာ famous…"Jul 13, 2012Ye`Mon Aung replied to ဟိန်းထက်'s discussion ကူညီပါ.........။"ပထမတစ်ခုကတော့ data type ပြသနာကြောင့်ပါ
printf() function ကို အဲ့ဒီလို pass လုပ်ပေးရင် သူက လက်ခံတာက character ချည်း သက်သက် မဟုတ်ပဲ string သို့မဟုတ် char array ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်
အဲ့လိုမျိုး error က double type variable တစ်ခုကို…"Jun 30, 2012Ye`Mon Aung replied to sannoo's discussion Using Zawgyi Font"ဘယ်လိုတစ်ဖက်ပဲ ရိုက်လိုက်တာလဲ သိပ်မရှင်းပါ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် gtalk အပြန်အလှန်ပြောမယ့် နှစ်ဖက်စလုံးမှာ zawgyi ကို install လုပ်ပြီး သေချာ configure လုပ်ထားရပါမယ်
မဟုတ်ရင်တော့ အတုံးတွေပဲ မြင်နေရပါလိမ့်မယ်....
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင်တော့…"Jun 30, 2012Ye`Mon Aung updated their profileJun 30, 2012Ye`Mon Aung is nowamember of MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT ProfessionalsApr 12, 2012 Welcome Them! RSS
Deputy Project Manager (Intern)
Year II IADCS (Business IT) University of Greenwich